Soomaaliya oo qarka u saaran in ay lumiso codka QM | KEYDMEDIA ENGLISH
Soomaaliya oo qarka u saaran in ay lumiso codka QM
Soomaaliya waa waddanka ugu badan ee Afrikaan ah ee lagu leeyahay deynta Qaramada Midoobay, oo gaareysa $1446,163, [Hal malyan, 446 kun, boqol lixdan iyo Saddex dollar], taas oo ah qaaraanka sanadlaha ahaa ee UN-ka.
UNITED NATIONS – Madaxweynihii hore, Farmaajo, ayaa 11-kii Janaayo 2022, hadal uu jeediyay ku sheegay in siyaasadda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, si weyn uga dhex muuqato fagaareyaasha Caalamka, sida xubinnimada Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay, iyo u sharraxnnaanta Goleyaasha Amaanka ee Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay.
Hayeeshee, warqad ku taariikhaysan 10-kii Janaayo 2022 oo ka timid Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay kuna sootay Madaxweynaha Golaha Guud, ayaa lagu sheegay in waddamo ay Soomaaliya ku jirto ku tunteen xeerarka Golaha, isla-markaana aysan bixin tabarucaaddii maaliyadeed ee Ururka.
Isla taaiikhda uu Farmaajo, hadalka jeedinayay 11-kii Janaayo, waxaa xaafiiskiisa yaallay, war isla-maalintaas ka yimid Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, kaas oo lagu wargaliyay in Soomaaliya qarka u saaran tahay in ay weyso xubinnimada UN-ka, deynta lagu leeyahay awgeed.
Sida ku cad qodobka 19aad ee Axdiga Qaramada Midoobay, waddan ka tirsan UN-ka oo lagu leeyahay deyn le'eg ama ka badan tahay qaddarka tabarucaadda maaliyadeed ee Ururka ee labo sano, wax cod ah kuma yeelan karo Golaha Guud, taas oo muujineysa in hadalka Farmaajo ee ku biiritaanka Golaha Ammaanka iyo xaqiiqda rasmiga ah kala fogyihiin.
Comoros, Sao Tome and Principe iyo Soomaaliya, waxa ay sii wadan doonaan, xuquuqdooda codbixinta, sida uu go’aamiyo Golaha loo dhan yahay, iayoo loo fiiriyay xeerarka Golaha maadaama ay yihiin dal dhaqaale ahaan u baahan in la kaabo.
Dalalka Afirika ee hadda fariista kuraasta Golaha Ammaanka, ayaa kala ah Kenya, Tunisia iyo Niger, labada danbe, waxaa dhawaan baddeli doona Gabon iyo Ghana , halka dalka Kenya ay banneyn doonto dhamaadka sanadkaan.
In Soomaaliya ku fariisato mid ka mid ah saddexda kursi e Golaha Ammaanka ku leedahay Afrika, waxa ay u baahan tahay galangal siyaasadeed oo gobolka ah, hayeeshe, hadalka Farmaajo, oo u muuqday olole doorasho wuxuu ku soo aaday, xilli uu waddanku qarka u saaran yahay inuu maqane-jooge ka noqdo fagaareyaasha Caalamka.